LPG Soo Dejinta, Dhoofinta iyo Gaadiidka Wadada iyo Tareenka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraLPG Dibedda, Dhoofinta iyo Gaadiidka ee wadada iyo Tareenka
07 / 02 / 2019 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, Nidaamka Isgaadhsiinta ee Intercity, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
soo dejinta iyo dhoofinta LPG jidka iyo tareenka
Qaanuunka sharciga ah ee u oggolaanaya soo dejinta, dhoofinta iyo transit-ka LPG ee wadada ama tareenka ayaa dhaqan galay.
No. 715 of Saliid Ceyriin, Jet Shiidaalka iyo Turkey go'aankii on Amendment xalinta XIDHIIDHA alaabtii by Road ama Tareenka, daabacay Madaxtooyada dhaqan galay.
Magaca go’aanka ayaa la beddelay
Isbeddelkii ugu horreeyay ee go'aanka waxaa lagu sameeyay magaca go'aanka. Sidaas awgeed, magaca xeerarka la raacay ayaa hadda ah Go'aan ku saabsan Soo dejinta, Dhoofinka iyo Gaadiidka ee Saliidda Ceyriin iyo Alaabooyinka Batroolka qaarkood ee Waddada ama Tareenka ..
DHAMMAAN DHAQAALAHA KAALMADA LAGU SAARO SAAMADA
Baaxadda qaanuunka iyo wax ka beddelka lagu sameeyay qodobka 1 ee cinwaankiisu yahay “Ujeedada ve iyo jumladda 2 ee cinwaankeedu yahay“ Baaxadda Caannimada ee Go'aanka; la ballaariyey si loogu daro dhammaan badeecadaha batroolka marka laga reebo ceyriinka ceyriinka iyo kuwa jet-ka.
Iyada oo wax laga beddelay qodobka 3 ee cinwaan looga dhigay N Qeexitaannada LPG, fikradda LPG si cad ayaa loogu gudbiyay hoosta Go'aanka. Cutubka sadarka (c) ee maadada ayaa loo muujiyay sida soo socota.
"Ç) Alaabta: Wax soo saarka batroolka ceyriinka iyo shidaalka ee ku xusan Qodobka 5015 ee Sharciga Suuqa Saliidda batroolka no. waxa ".
AQOONSIGA AQOONSIGA SIYAASADDA WAA HADA KU SAARSAN LPG
Go'aanka "mabaadiida guud" ee cinwaankiisu yahay 4. Wasaaradduna waxay awood u leedahay inay bixiso ogolaanshaha soo dejinta, dhoofinta ama soo-dejinta jidadka iyo tareenka, haddii loo arko inay lagama maarmaan tahay oo degdeg ah. Si aad u aqriso isbedelka Guji. (enerjigünlüg ah)
Saliidda shidaalka ee leh dhulka iyo tareemada
Tareenka Indonesia oo ku dhuftay booyad shidaalka LPG ah oo lagu magacaabo 2 ayaa dhintay (Video)
Keenista LPG ee Tareenka
lpg gaadiid tareenka
Saliid Caato ah
Gaadiidka LPG wadada
Gaasiyoolayaasha Liquefied Petroleum